China JHPRO JH-230A EPA evunyiweyo entsha ephathekayo Ipetroli Angle Grinder for Metal Stone Cutting and Grinding mveliso kunye nabenzi | Jiahao
isando sokudiliza umbane
isando esijikelezayo sombane
grinder engile ipetroli
ipetroli engundoqo drill
umatshini wokusika ipetroli
ipetroli emhlabeni auger
utsalo lwefuthe lepetroli
Umqhubi wepetroli kunye nesando
ipetroli isando rotary
ipetroli ukubhola umthi
ukuhambisa umthi wepetroli
I-JHPRO JH-230 entsha ephathekayo yePetroli ye-Angle Grinder ye ...
JHPRO JH -...
JHPRO JH-IE44F-5 yobungcali
JHPROJH-32A / 32B rota ngexabiso eliphantsi
I-JHPRO JH-230A i-EPA yangaphakathi
Ihowuliseyili zekhonkrithi Cutting Saw
JHPRO JH-58 ...
JHPRO JH-IE48-F kwezolimo umatshini umba umthi pl ...
I-JHPRO JH-150 ene-2 ​​Chisel Bits Ukudilizwa kombane ...
I-JHPRO JH-65 esemgangathweni Umsebenzi onzima 65mm 1520W / 1700W ...
I-JHPRO JH-4350AK INDLELA ENTSHA YOKUCHITHA isando 13 ...
JHPROJH-32A / 32B rotary ihamile drill 1350W / 1500W Sds ...
I-JHPRO JH-28A / JH-28B 850w / 1150W IXHOTA ELIQHELEKILEYO NGE-3 ...
I-JHPRO JH-230A i-EPA ivume i-Grill ye-Angle ye-Gasoline ye-Angle Grinder ye-Metal Cutting kunye ne-Grinding
I-JH230 ye-petroli ye-petroli grinder inikezela ukuphuculwa kokusebenziseka ngaphandle kokubeka esichengeni ukusebenza kwayo kakuhle. Ukuphola kweinjini okuphuculweyo kwenza ukuba ubushushu be-injini esezantsi bube mnandi ngakumbi. Imodeli entsha kulula ukuyilungisa, ilunge kakhulu kwaye inobomi obulungileyo obuphuculweyo. Ukufikeleleka ngokulula kwenza ukugcinwa kunye nokuphathwa komoya opholileyo.
Isando sokudiliza i-JHPRO I-grinder ye-engile inemisebenzi yokusika kunye nokusila, inokucheba umthi okanye isinyithi, ilitye. Sigxile ekuveliseni izixhobo ezikumgangatho ophezulu ezinokuthenjwa ukuhambisa ukusebenza okuphezulu. Ke ukuba ufuna i-grinder ye-petroli grinder enamandla emisebenzi efana nokuguba nokusika, i-JH230 grinder ye-engile lukhetho oluhle kakhulu.
Isixhobo seJHPRO siquka ubunjineli benene baseChina kunye nobuchule. Siye siphuhlisa izimvo ezintsha kwisityalo sethu esise-yongkang ukusukela ngo-1994, emva koko siziguqula saba zizixhobo zobuvulindlela kunye nezixhobo zabasebenzisi abaziingcali kwihlabathi jikelele. Inqanaba lenkonzo yethu ebalaseleyo ngaphambi nasemva kwentengiso, ikwasenza ukuba sibe liqabane elomeleleyo kuwo onke amashishini.
Le grinder ye-engile inobunzima obucekeceke nge-32.6cc yokuqhubekeka kwemizi-mveliso yeeweld seams kunye nobunzulu bokusika njenge-grinder enkulu yeekona (Ø 230 mm) enesiqingatha sobunzima kuphela
I-ergonomics egqibeleleyo kwaye isebenza ngokulula
Injini yeJHPRO yeLonglife enezibetho ezibini
I-JHPRO enamandla ye-Angle Grinder -Xhotyiswe nge-injini ye-32.6CC ene-1.2KW yamandla okuphuma, le grinder iphathekayo inokuvelisa amandla amakhulu kwezona zicelo zinzima.
Uyilo lwe-Ergonomic-ukukhanya kunye nokuyilwa komzimba okuxineneyo kunokubonelela ngokuthuthuzela okungcono kunye nokunciphisa ukudinwa ekusetyenzisweni kobuchwephesha nasekuguqulweni kwezicelo.
Ukukhuselwa kokhuseleko kunye nokuhlala ixesha elide-Ngexesha lokusebenza, isiciko sokukhusela i-grinder ephathekayo siyakuthintela iintlantsi kunye neetshipsi zetsimbi ngexesha lokusetyenziswa ukukhusela ekonzakaleni.
Ukufuduka okwenyani kwama-32.6cc
Ifuna ulondolozo oluncinci
Kulula ukusebenza kunye namandla anamandla.
Akukho sidingo sonikezelo lombane
Isibambiso esincinci, ubunzima bokukhanya
Egqithileyo I-JHPRO JH-230 Entsha ephathekayo yePetroli ye-Angle Grinder yokuCoca kunye nokuGaya amatye
Okulandelayo: I-JHPRO JH-130A i-EPA yazisa ngokutsha ipetroli ephezulu yesixhobo sokuqhuba iRock Core Rig Ukuthengisa
I-230mm ye-Angle Grinder
Ipetroli Angle Grinder
Intengiso eshushu yeAngle Grinder
Isantya esiguqukayo seAngle Grinder
JHPRO JH-230 Entsha ephathekayo Ipetroli yeAngle Grinde ...
Yongkang Jiahao Isixhobo Co, Ltd, indawo yeYupi yeShishini, isitalato sasentshona, isixeko iYongkang, kwiPhondo laseZhejiang 321300, PRChina
Sitsalele ngoku: 0086-13906792067